China Modern Simple White Oak Japanese Style jikọtara ọnụ ụlọ ime ụlọ Sofa Ngwa ụlọ # 0027 Nlụpụta na ụlọ ọrụ | Yamazonhome
Modern Modern White Oak Japanese Style Jikọtara Ndụ Ime ụlọ Sofa Ngwongwo # 0027
Nọmba nlereanya: Amac-0027
Size: oche abụọ: 1370 * 750 * 840mm
Single oche: 810 * 750 * 840mm
Oche atọ: 1970 * 750 * 840mm
Oge oyi na udu mmiri sofa-nzube sofa
The n'ozuzu etiti na-dị ọcha na-acha ọcha, dum osisi eku, ezigbo sọrọ-nzube imewe n'ihi na oyi na ọkọchị, ọ bụ na-ala ịnọ na-enweghị kwushin, na jụụ akụkụ bụ na buttocks. Ahịrị ndị ahụ dị mfe ma maa mma, nkwado ahụ dịkwa mma. A na-eji aka ejiri aka rụọ osisi ọ bụla wee rụọ ọmarịcha iji hụ na agbanwe agbanwe. Nnukwu azụ azụ na-ekwe nkwa nkasi obi gị na izu ike gị, na-enye gị ezigbo sofa ahụmahụ ....
High resilience ogbo fom
Ugbo elu nwere ike zuru ezu, juputara na ọdụ ụgbọ mmiri dị elu, akwa mkpuchi oche ahụ bụ owu na-acha akpụkpọ anụ na akwa linin, ma jiri ọgwụ na-eguzogide ọgwụ, enweghị bọọlụ, enweghị ebu, enweghị adalata, esemokwu na mba ọkụ eletrik. A nwalere sofa ọdụ dị omimi maka ọtụtụ oge, ma bụrụ nke kachasị nke sayensị ka enyere. Mgbe ndị ọbịa bịara n'ụlọ ahụ, enwere ike iwepụ azụ ahụ iji mee akwa nwa oge.
Humanized imewe nke currest armrests
A na-eji aka na-eme ka a na-eme ka a na-eme ka a na-eme ka a ghara ịmị ụfụ, na-adị ire ụtọ na-emetụ aka, ma na-ejikọta ya na usoro tenon na-mortise, nke siri ike ma sie ike. Osisi siri ike, osisi ahụ siri ike, n'agbanyeghị otu ị si awụlikwa elu, sofa agaghị ama jijiji, ọ nwere ike ịkwado ọ bụla ị nọ na-enweghị nchegbu gbasara ịda. Ogwe aka ndị a na-atụgharị na-akwado aka gị na ogwe aka gị, na-enye gị ohere izu ike n'akụkụ ọ bụla nke ọma.
Thicken sofa ụkwụ
A na-eme ka akụkụ ọ bụla nke sofa mee ka ọ dị ọcha ma dị mma, na-eme ka ọ dịkwuo mfe ịdabere na ya, ọ gaghị emetụ akụkụ ahụ niile aka. A na-eji ụkwụ mee sofa ụkwụ siri ike ma dị arọ iji mee ka ibu ahụ sie ike. Ndabere nke ụkwụ sofa adịghị amị amị ma na-eguzogide ọgwụ, nke na-echebe ala gị ma mee ka ndụ sofa dị ogologo.
Nke mbughari na nke nwere ike ịsacha wepu
Nwepu oche oche akwa nwere ike ị wepu ya ma wepu ya, yabụ na ị gaghị echegbu onwe gị banyere ịdị ọcha. Ndụ na-enye anyị àgwà nke ịdị jụụ na izu ike, na-agbasa ọnọdụ ọ ,ụ, na obi ụtọ na-amaghị ama jupụta n'ụlọ ọhụrụ ahụ.
A dịgasị iche iche nke kenha ịke agba
Ahọrọ oak nke North America, ihe dị afọ 100, nwere ike igwe dị elu, ederede doro anya, na uru osisi dị elu. A na-agbakọta nnukwu slabs ozugbo, yana ihe ndị siri ike, dị ike ma dịgide.
Nke gara aga: SUP paddle board color matching inflatable surfboard na nku 0372
Osote: Sterner Pet Metal Main House Small Animal Shed onu na ndepụta 0244
Ugboro abụọ na-echegharị Sofa
Sofa Bed na Nchekwa
Sofa oche ndina
Solid osisi sideboard mfe nchekwa kabinet bú ...
Nkuku nke The Office Bụ a Solid Wood ụba ...
2020 ọhụrụ guzo SUP surfboard ntụrụndụ mmiri s ...
Solid osisi kichin kabinet modular pantiri ụlọ ...